Nhau - Maitiro ekuisa iyo Mower Mulching Nereza
Mhando dzeLawn Mower Blades:
Mashizha ekucheka lawn anowanzo shandisa marudzi maviri emashizha. Kazhinji kazhinji, mower anoshandisa blade yekucheka. Iri jasi rinocheka huswa uye rinoriburitsa kuburikidza neketi kunze kwedivi remuchina. Inoshandiswa zvakare ndeye mulching blade. Izvi zvakagadzirirwa kucheka huswa kakawanda uye kushandura huswa kuita zvidimbu zvakanaka. Izvi zvidonha zvinowira pasi pasi pemushini weuswa uye zvinoshanda sehwanda hwe mulch yehuswa. Kuisa mower mulching blade chinhu chinonyanya kuitwa chero nemurimi webindu epamba achishandisa maturusi anowanikwa pamba kana pane chero chitoro chekumba.
Ungachinja Sei Mashizha Emagetsi?
1.Plower the mower pane yakati sandara kushanda nzvimbo. Nzvimbo yacho inofanira kuve yakapetwa kaviri saizi yemucheki. Pfeka ziso rekudzivirira uye magirovhosi. Bvisa iyo tambo yemoto kubva kune sparkplug.
2.Turn mower lawn parutivi rwayo. Wedge iyo 6-ne-2-inch huni block pakati peiyo iripo lawn mower blade uye nehuswa mower dzimba dzimba. Huni dzinofanirwa kuve dzakasungwa nenzira yekuti banga harigone kufamba.
3.Bvisa nati pakati pebanga riripo, uchishandisa wrench. Svetedza washer iripo kubva pambiru. Bvisa iro raive riripo kubva pambiru. Isa padivi huni huni. Sevha iyo nati uye washer.
4. Isa iyo mulching blade pane iyo posvo. Shandisazve washer yaivapo uye isedzere pamusoro payo. Sununguka kukora iyo iripo nati munzvimbo ine socket uye socket wrench. Sanganisa huni pakati peiyo nyowani mulching neparutivi rwegwenzi rekucheka patsangadzi. Isa socket pane torque wrench. Simbisa iyo nati ine torque wrench kune iwo mutoro unodikanwa mumashini ekucheka lawn mulching blade zvinyorwa.
5.Tenderedza mushwa wecheka kumashure kunzvimbo yayo yekucheka. Isa chivhariso mumushambadziro wemashizha ejection kupfura kuti uswa huve mukati memushini unocheka dzimba sezvo uri kubvongodzwa.
6 Isa zvakare tambo yechipfuva kune iyo sparkplug. Tanga mower lawn. Ita shuwa kuti iyo nyowani mulching blade inoshanda pasina chero kujairika vibration. Cheka chikamu cheuswa kuti uve nechokwadi chekuti huswa haubude kubva muejection chute.
Batanidza mashizha emaleching kune anocheka mower nekudzikisa dhiza pane kudzora mower anotasva parutivi.